मनोज गजुरेल आईसीयूमा हुँदा पूर्वपत्नी मीना ढकालको मनछुने पत्र…उनि भन्छी अहिले पनि उत्तीकै माया गर्छु ! – yuwa Awaj
कार्तिक २२, २०७७ शनिबार 4
काठमाडौं : हास्यकलाकार मनोज गजुरेल कोरो’ना संक्रम’णका कारण सिकिस्त रहेका बेला पूर्व पत्नी मीना ढकाले पत्र लेखेकी छन् । जुरेलको अवस्था ग’म्भीर भएपछि आज बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल आइसीयूमा राखेर उपचार
भइरहेको बेला उनलाई पूर्व पत्नी मीनाले फेशबूक मार्फत मायाँरुपी शब्दहरु खर्चिदै पत्र लेखेकी हुन् । लोकप्रीय हास्य कलाकारका रुपमा स्थापीत गजुरेललाई उनका धेरै सुभचिन्तकहरुले स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छन् । गजुरेलको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी नआएपनि शुक्रबार बिहानकाे जानकारी अनुसार उनको आइसीयूमै उपचार भइरहेको छ ।
गत कात्तिक १० गते को’रोना संक्र’मण पुष्टि भएका गजुरेलको स्वास्थ्य अवस्था बुधबारबाट ग’म्भीर भएपछि उनलाई बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल भर्ना गरिएको पारिवारिक श्रोतले बताएको छ ।
यसैबीच उनको पूर्बपत्नी मीना ढकालले लेखेको स्टाटस यस प्रकार छ !
जिन्दगीले जुनसुकै मोड अख्ति’यार गरेको भएपनि तिमी कुनै समयको मेरो प्रेमी थियौ । मेरो आफ्नै जन्मदातालाई भन्दा बढी प्रेम तिमीलाई गरेरै तिमीसंग एकाकार भएकी थिएँ । हामी एक भएका थियौँ र म परम्परा अनुसार तिम्रो सिंदुरको ऋ’णी भएकी थिएँ ।
Prevको हुन जसले लकडाउनमै ‘२० हजार’ बिरामीलाई अस्पताल पु”र्‍याए…हेर्नुहोस् ।
Nextनेता बाँस्कोटा भन्नुहुन्छ : देशलाई संघीयता खाँचो नै थिएन, द्व’न्द्व व्यवस्थापनको लागि मान्दिनु परेको हो…हेर्नुहोस् ।